पजलहरू Em प्रविष्ट गर्नुहोस् र Emulator.online बाट आनन्द लिनुहोस्
नोट: मोबाइल संस्करण प्ले गर्न स्क्रीन घुमाउनुहोस्
पजलहरू। तल हामी तपाईंलाई यो सुन्दर खेल बुझ्नको लागि तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा देखाउनेछौं। यसको व्युत्पत्तिक अर्थबाट, यसको उत्पत्ति, यसको फाइदाहरू, पजलहरू प्रकारहरू छन् जुन अवस्थित छन् र यसलाई चाँडै समाधान गर्नको लागि रणनीति पनि।
पजलहरू: चरण by बाट कसरी चरण खेल्ने
एक बनाउन पहेली नि: शुल्कका लागि अनलाइन, तपाईंसँग गर्नुपर्ने छ यी निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्:
1 चरण। तपाईंको मनपर्ने ब्राउजर खोल्नुहोस् र खेल वेबसाइटमा जानुहोस् Emulator.online
2 चरण। वेबसाइटमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै, खेल पहिले नै स्क्रिनमा प्रदर्शन हुनेछ। तपाईं मात्र गर्न छ हिट खेल र तपाइँ सबैभन्दा धेरै मन पराउने पजल छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँ सबैभन्दा मनपर्ने छवि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, र यसलाई छनौट गरेपछितपाई पजलमा भएको टुक्राहरूको संख्या पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
3 चरण। यहाँ केहि उपयोगी बटनहरू छन्। "आवाज थप्नुहोस् वा हटाउनुहोस्", बटन दिनुहोस्"प्ले"र खेल सुरु गर्नुहोस्, तपाईं सक्नुहुन्छ"रोक्नुहोस्"र"पुन: सुरू गर्नुहोस्"कुनै पनि समय।
4 चरण। सबै टुक्राहरू एकैसाथ प्राप्त गर्नुहोस् जुन तपाईंले छनौट गरेको छवि सिर्जना हुन्छ।
5 चरण। एउटा खेल समाप्त भएपछि, क्लिक गर्नुहोस् "फेरी सुरु" अन्य पजलहरू गर्न।
पज्जल भनेको के हो? 🧩
Un पहेलीयो एक छ धेरै र विभिन्न टुक्राहरूद्वारा सिर्जना गरिएको खेल जुन समग्र, सामान्यतया एक फिगर, नक्शा वा फोटोहरूसँग जोड्न आवश्यक छ। यो धेरै पुरानो खेल हो। कुनै श doubt्का बिना, बच्चाहरू र वयस्कहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो शौक मध्ये एक। थप, साइकोमोटर बेनिफिटहरूको श्रृंखलाको विकासमा योगदान गर्दछ।
तर जो कोहि पज्जल भर्खरै आविष्कार गरिएको थियो लाग्छ गलत छ। जस्तो मैले भनें, उहाँ धेरै बुढो हुनुहुन्छ। र, पहिलो, उनको आविष्कार अर्को उद्देश्यको लागि थियो।
पजलको उत्पत्ति ☝️
यद्यपि ईतिहासकारहरू अझै पहेली देखा पर्न सक्दैन, त्यहाँ यसको उत्पत्तिको बारेमा सिद्धान्तहरू छन्।
सब भन्दा धेरै स्वीकार्य मध्ये एक अ cart्ग्रेजी कार्टोग्राफर हो, जोन स्पिलस्बरी, खेल आविष्कार। आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई भूगोल सिक्नको लागि, १ 1760० मा जोनले संसारका विभिन्न भागका टुक्राहरूको समूह बनाए। सँगै, तिनीहरू संसारको नक्शा गठन। काठका बोर्डहरू र स्टिलेटोस प्रयोग गर्दै, स्पिलस्बरी आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई रमाईलो र सिकाई प्रदान गर्नुभयो।
तर कोही भन्छन् पज्जल चीनियाँ द्वारा आविष्कार गरिएको थियो. Tangram यो चीनमा एक पुरानो खेलौना हो। योसँग केवल सात टुक्राहरू छन्, तर तिनीहरूले धेरै छविहरूको गठनलाई अनुमति दिन्छ। जे होस्, यो हामी प्रयोग भइरहनु भन्दा बिलकुलै फरक छ।
वास्तवमा, स्पिलसबरीको आविष्कार पछि, पज्जल धेरै लोकप्रिय भयो। त्यो हो, तिनीहरू म्यानुअल तरिकाले बनाइएको थियो, त्यसैले तिनीहरू धेरै महंगा थिए। मात्र थियो औद्योगिक क्रान्ति (१1760०-१-1820२० / १1840०) मा पहेली सस्ता भयो। यो किनभने क्रान्ति को प्राविधिक प्रगति तिनीहरूले खेलौना छिटो र सस्तो बनाउन आवश्यक उपकरणहरू प्रदान गर्‍यो।
महामन्दी (१ 1929 २)) को समयमा, खेलौनाले उत्पादनमा बूमको अनुभव गर्‍यो। त्यहाँ एक पन्सेल भाडा पनि १० सेन्टको लागि थियो! सबैभन्दा माथि, मानिसहरूले खेलौना खेल्दा सन्तुष्टि र सन्तुष्टि खोज्थे।
शब्द पहेलीको उत्पत्ति
शब्द पहेली (स्पेनिशमा पजल) सबैलाई ज्ञात र प्रयोग गरिएको छ। यसको मूल अंग्रेजी हो। यसको व्युत्पत्तिक जरा ल्याटिनबाट ल्याटिन क्रियाबाट आएको हो म राख्छु (यसको मतलब हो राख्नुहोस्).
कसरी पज्जल बनाउने: सल्लाहहरू
सब भन्दा उपयुक्त पहेली छनौट गर्नुहोस्
प्याकेजिंग मा उमेर संकेत उपयोगी छ, तर एक अलग मापदण्ड को रूप मा प्रयोग गर्नु हुँदैन। यो खेलसँग तपाईंको बच्चाको चिनारीको पनि विचार गर्नुहोस्। यदि बच्चाको कुनै अघिल्लो अनुभव छैन भने, कम पार्टिस भएको मोडेललाई प्राथमिकता दिनुहोस्, जबसम्म ऊ यसको बानी हुने छैन।
चढ्नका लागि उपयुक्त वातावरण छ
एक पटक पज्जल खरिद गरिसकेपछि यो आवश्यक छ असेंबलीका लागि उपयुक्त कन्फिगरेसन छनौट गर्नुहोस्। प्राथमिकताका साथ, ठाउँ शान्त हुनुपर्दछ, जहाँ मान्छेहरूको बहाव हुँदैन।
याद गर्नुहोस् कि यस गतिविधिलाई धेरै एकाग्रता आवश्यक पर्दछ र त्यो अत्यधिक आवाज वा आन्दोलनले हस्तक्षेप गर्न सक्दछ। ध्यानमा राख्दै, यो कोठाको कुना वा अरू ठूलो कोठा छ जसमा ठूलो टेबुल छनौट गर्न लायक छ।
साथै, भावना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनु हो र टुक्राहरू नफर्काउनु जस्तै तपाईं घर पुग्नेबित्तिकै हराउन सक्नुहुनेछ, जुन अन्ततः निराशाको कारण हुनेछ। कल्पना गर्नुहोस्, समर्पण दिन पछि, तपाईं छवि अपूर्ण छ पाउनुहुनेछ।
गाईडका रूपमा टेम्प्लेट प्रयोग गर्नुहोस्
सन्दर्भको रूपमा गाइड प्रयोग गर्नु भनेको एक सुझाव हो जुन बेवास्ता गर्न सकिँदैन। धेरै जसो समय, खेलौना आफैंमा भेला हुने छविको प्रजनन ल्याउँछ।
यस मोडेललाई सबैको लागि पहुँचयोग्य राख्नुहोस् जसले सम्मेलन प्रक्रियामा मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ, ताकि जब तिनीहरूसँग प्रश्नहरू छन् तिनीहरूले यसलाई सन्दर्भ गर्न सक्दछन्। त्यो अवस्थामा, विवरणमा ध्यान एक फरक र गति पूरा गर्न सक्दछ।
कुना टुक्राहरूबाट सुरू गर्नुहोस्
हाम्रो अन्तिम टिप उत्तम विधानसभा रणनीति आफै परिभाषित गर्न सम्बन्धित छ। यस अर्थमा, यसको कुनाहरूबाट सुरु गर्न सिफारिस गरिन्छ, जसको टुक्राहरू सिधा पक्षहरू छन्। यस तरिकाले, तपाईं छवि को अन्तिम आकार प्रोजेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि टुक्राहरूको संख्या धेरै ठूलो छ भने, संसारको सब भन्दा ठूलो ले केही प्रभावशाली सँगै ल्याउँछ Thousand० हजार टुक्रा , ब्लक असेंबली पनि एक राम्रो विकल्प हुन सक्छ, विशेष गरी यदि त्यहाँ बच्चाहरू सहभागी छन्। तिनीहरू मध्ये प्रत्येकले स-साना टुक्राहरूको लागि जिम्मेवारी लिन सक्दछ र त्यसपछि वयस्कले उनीहरूलाई सँगै राख्ने जिम्मेवारी लिन्छ।
लगभग अन्तको नजिक, हामी एक थप दिशानिर्देश दिन्छौं: टुक्राहरू बीच फिट जबरजस्ती एक अनावश्यक दृष्टिकोण हो। जब तपाइँ महसुस गर्नुहुन्छ कि ती पूरक छैनन्, अन्य विकल्पहरू खोज्नुहोस् ताकि उनीहरूलाई नोक्सान नहोस्।
पजल😀 खेल्दा फाइदा
तपाईले पक्कै सुन्नुभयो पजल लाभ। यस प्रकारको खेल मस्तिष्कलाई उत्तेजित गर्ने तरिका शानदार छ र फरक उमेरका व्यक्तिहरूको लागि अनगिन्ती लाभहरू उत्पन्न गर्न समाप्त गर्दछ।
साना भागहरूलाई एसेम्बल गर्दै र अन्तमा प्यानल निर्माण गर्न सक्षम हुनु भनेको हो उत्कृष्ट संज्ञानात्मक व्यायाम वृद्ध, वयस्क, युवा र बच्चाहरूका लागि, विशेष गरी उनीहरू जो शैक्षिक चरणमा छन्।
सामान्यतया, पज्जल मेमोरीको लागि राम्रो हो र स्कूलमा जब मुख्य रूपमा बाल्यकालको शिक्षामा लागू गरिन्छ, यसले ठूलो मात्रामा सिक्ने सुविधा प्रदान गर्दछ। के तपाईं स्कूलमा यो उपकरण प्रयोग गर्ने फाइदाहरूको बारेमा बढी जान्न चाहानुहुन्छ, यसका नियमहरू के हुन् वा यसले मानिसहरूलाई कुन पज्जल राख्न मनपर्दछ? पढ्न जारी राख्नुहोस्।
१- पज्जलले दिमागलाई उत्तेजित गर्दछ
पज्जलको पहिलो प्रमुख योगदान बौद्धिक स्तरमा छ, किनकि पज्जलले दिमागलाई उत्तेजित गर्दछ। त्यसैले, संज्ञानात्मक कौशलको विकास यो ठूलो फाइदा हो।
गतिविधि समस्याको समाधान गर्न बच्चाको क्षमतामा सीधा प्रभाव पार्छ, बढ्दो सोच र तपाइँको कौशल सुधार। संख्या, र colors्ग, आकार, नक्शा, ठाउँ, यातायात, र ज्ञानका अन्य धेरै क्षेत्रहरूको ज्ञानलाई उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ।
२- पहेली मेमोरीको लागि राम्रो छ
पज्जल प्रयोग गर्नुको अर्को सान्दर्भिक पक्ष भनेको यो राम्रो हो स्मृति । यो योगदान बिर्सने समस्याको साथ व्यक्ति लागि महत्वपूर्ण छ।
यो हुन्छ, त्यसकारण, प्रत्येकको लागि सहि टुक्राहरू पत्ता लगाउँदा व्यक्ति प्रारूपहरू र उनीहरूको सम्भावित जोडीहरूको बारेमा जानकारी संकलन गर्दछ। के तपाईं पुराना व्यक्तिको मेमोरी समस्याको साथ यो गतिविधि घुसाउने कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ?
- पज्जलले मोटर समन्वयको विकास गर्दछ
बाल्यकालको एक चरण छ जुन साना बच्चाहरूले उनीहरूको मोटर कौशल विकास गर्न आवश्यक हुन्छ। उसका हतियार र औंलाहरू अझै दूरी र वस्तुहरूको हेरफेर बारे अनजान छन्।
तसर्थ, एक दर्शकको उद्देश्यले यस दर्शकलाई ध्यान दिन्छ प्रारम्भिक बाल्यकालमा पनि मोटर समन्वयलाई उत्तेजित गर्नुहोस् । एउटा सानो भाग अर्कोमा फिट गर्ने प्रयास गर्नु हात, आँखा र हातको चाल नियन्त्रण गर्न एक ठूलो प्रोत्साहन हो।
जहाँसम्म, पजल ठूलो र अधिक रंगीन टुक्रा र धेरै साधारण सम्मिलितको साथ, बच्चाको विशिष्ट उमेर अनुरूप हुनु पर्छ। यो वयस्कहरूमा वा समन्वय कठिनाइहरूको साथ वृद्धहरूमा पनि लागू हुन्छ।
- पज्जलले सामाजिक अन्तरक्रिया गराउँछ
स्कूल अवधि बच्चाहरूको लागि एक अनुकूलन चरण हो। साथीहरूको गठन र समूहहरूको पहिचान र समाजको धारणा स्कूली बच्चाहरूको लागि महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरू हुन्।
र यो लक्ष्य हासिल गर्न पज्जल समाजीकरणको लागि एक उत्तम उपकरण हो । खेलको बखत, बच्चाहरू अन्तर्क्रिया गर्न सक्छन्, सहयोग गर्न सक्छन्, प्रतिस्पर्धा गर्न, जित्ने, बहस गर्न सक्न, सफलताहरू र असफलता सम्पूर्ण कक्षामा साझा गर्न सक्छन्।
Puzzle- पजलले धारणालाई प्रोत्साहित गर्छ
यस खेलले स्कूली बच्चाहरूको धारणालाई पनि प्रोत्साहित गर्दछ। विचारहरू अवलोकन गर्न, तुलना गर्ने, विश्लेषण गर्ने र सिन्थेसाइज गर्ने सीप सम्पत्ति हो जुन प्रत्येक बच्चाको शिक्षामा काम गर्छ .
यी लाभहरू किशोरावस्था र वयस्कतामा विस्तार हुन्छन् र पेशेवर क्षेत्रमा उच्च मूल्यवान गुणहरू हुन्छन्। ठूला कम्पनीहरूको बजार, बजार अवसरहरूको उचित उत्तेजनाको साथ, बाल्यकालमा पैदा हुन सक्छ।
बजारमा, पजलमा धेरै संस्करणहरू छन्। र यो सम्झन लायक छ कि तिनीहरूसँग विभिन्न आयामहरू हुन सक्छन् केवल ती सीधा सतह र एक आयाममा माउन्ट गरिएको हुन्छन्।
सबै भन्दा पारम्परिक प्रकारका पजलहरू हुन्: बेडलाम घन, जादू घन, योग घन, पेन्टामिनोस र Tangram। यी पजलहरू मोडेलहरूको बारेमा थप विवरणहरू पत्ता लगाउनुहोस्:
यो खेल समावेश गर्दछ १ pieces टुक्रा जो सिद्ध घन बनाउँछ।यो ब्रुस बेडलामले आविष्कार गरेको पहेली हो। कुलमा, त्यहाँ तेह्र टुक्रा टुक्रा छन्। विचार सँगै x x x x ube घन राख्नुका साथै रचनात्मक हुनु हो, किनभने चुनौती भनेको १4हजार भन्दा बढी तरिका पत्ता लगाउने हो।
यो संस्करण थ्रीडी ढाँचामा पजलहरू बीच सबै भन्दा लोकप्रिय छ।
जादू क्यूब हाम्रो एक पुरानो परिचित हो। यसको आधिकारिक नाम रुबिक क्यूब हो, हंगेरीबाट आविष्कारक आर्वे रुबिकलाई सम्मान गर्ने नाम। यो १ 1974 1980 मा आविष्कार गरिएको थियो र ठूलो जन्म भएको थियो - यसले गेम अफ इयर अवार्ड जित्यो। १ XNUMX s० को दशक यस पज्जलको पराकाष्ठा थियो, जुन आज पनि व्यापक छ।
तिनीहरू पॉलीथिलीन क्युब्स हुन् जो सँगै घन बनाउँछन्।
यो अर्को प्रकारको घन आकारको पहेली हो। यसको आविष्कार पिट हेनले गरेका थिए, जसले क्वान्टम मेकानिक्सको क्लासमा भाग लिएपछि यसलाई सिर्जना गरेका थिए। खेलले poly x x x c घन बनाउने सातवटा पॉलीथिलीन घन प्रयोग गर्दछ। यी टुक्राहरू २ 3० भन्दा बढि असम्ब्ली आकारहरू बनाउँदछन्।
यो पजल छ पाँच वर्ग विभिन्न तरीकाले व्यवस्थित। कुलमा, त्यहाँ १२ पेन्टामिन ढाँचाहरू छन्। यो पज्जलले टेट्रिस वा र्याम्पार्ट कम्प्युटर खेलहरूलाई प्रेरित गर्‍यो। यस खेलले प्रख्यात टेट्रिसलाई प्रेरणा दियो।
El ट्याangग्राम योसँग केवल सात टुक्रा छन् जुन 5,000,००० भन्दा बढीको आंकडा बनाउन सक्छ।
यो हो पहेली वा जिगस अधिक पारंपरिक, आज अधिक व्यावसायीकृत फारमहरूको तुलनामा। उहाँ सात टुक्राहरूको साथ चीनमा जन्मनुभएको थियो र उनीहरूले सँगसँगै धेरै व्यक्तित्वहरूलाई जन्म दिन्छन्। एक इन्साइक्लोपीडिया यति टाढासम्म जान्छ कि 5,000,००० भन्दा बढी तथ्या .्क स to्कलन गर्न सम्भव छ। कुनै श doubt्का बिना, यो आजको लोकप्रिय आयामको साथ पजल खेलहरूको लागि प्रेरणा हो।
El सबैभन्दा ठूलो पहेली नाम छ "किथ Haring: डबल पूर्वव्यापी"यसमा ,२,२32,256 टुक्रा छन्, करीव 5.44..1.92 एमएक्स १. 17 २ मी मापन गर्दछ र यसको प्याकेजि anको प्रभावकारिता १ XNUMX किलोग्राम छ।
पेंटिंग को प्रजनन "अभिसरण"जैक्सन पोलकलाई सँगै राख्नको लागि सबैभन्दा गाह्रो पजलहरू मध्ये एक मानिन्छ।
१ 1997 72 In मा पेरूमा छापामार समूह मोभिमान्टो रेवोल्यूसियोनियो टुपाक अमारूले जापानी राजदूतको निवासमा आक्रमण गरे XNUMX२ भन्दा बढी बंधकहरु र वार्ताबाट निराश भएर उनीहरूले एउटा मागे २,००० टुक्रा पहेली। यो यस्तै थियो कि बंधकहरुलाई एक शौक हुन सक्छ र वार्ताबाट तनावग्रस्त हुँदैन।
१ 1933 XNUMX मा पजलहरू कार्डबोर्ड हुन शुरू भयो। सबै भन्दा, यो यो सस्ता बनायो, यो पनि एक हप्ता लगभग १० लाख को बिक्री उत्पन्न!